Ny vokatra elektronika dia ampiasaina amin'ny sehatra rehetra, ary ny ankamaroan'ireny vokatra elektronika ireny dia mila kosena alohan'ny hametrahana azy eny an-tsena. amin'izao fotoana izao, ny fitaovana fantsom-bovoka mahazatra ampiasaina dia ny masinina manarona fantsom-panafody magnetron. Eto, tonga isika Jereo ireo lasibatra nampiasaina tamin'ny fitenenana. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana kendrena ampiasainay dia karazany telo hafa: lasibatra vy, lasibatra kendrena, ary lasibatra mitambatra..
Betsaka ny tanjona kendrena ampiasaina amin'ny kapila mafy. Horonantsary maro sosona dia nopetahany takelaka amin'ny rakipeo. Samy manana ny asany ny sarimihetsika tsirairay. Amin'ny sosona ambany, 40Ny chromium matevina na ny chromium matevina dia hopetahany takelaka hanatsarana ny firaiketam-po sy ny fanoherana ny harafesina. , Ary avy eo nopetahany alimo chromium kobaltal matevina 15nm eo afovoany, ary avy eo nopetahany alimo kobalta 35nm matevina, toy ny fitaovana mazika, ity fitaovana ity dia afaka maneho tanteraka ny toetran'ny magnetisma sy ny fanelingelenana ambany, ary farany nopetahany sarimihetsika karbaona 15nm matevina.
Ny tanjon'ny fikorianan'ny loha andriamby dia matetika firaka vy-nikela, ary misy akora fitambarana vaovao nampiana taty aoriana, toy ny vy nitrida, vy tantalum nitride, nitrida aluminium vita amin'ny vy, Sns, izay fitaovana kendrena sarimihetsika diélectrique avo lenta avo lenta avokoa.
Ny kapila CD dia hampiasa sarimihetsika alimo ho toy ny sosona taratra azo apetaka amin'ny sombin-javatra plastika, fa ho an'ny kapila CDROM sy DVDROM, sarimihetsika aluminium tsy azo ampiasaina, satria hisy sosona loko ao amin'ireo kapila ireo, ary ny akora ao amin'ny Aluminium dia manimba amin'ny ambaratonga iray, ary soloina sarimihetsika volamena na volafotsy amin'ny ankapobeny.
Ny sosona horonantsary an'ny kapila optika dia misy sosona maromaro ihany koa. Izy io dia nopetahany sosona firaketana vy-kobalta 30nm matevina amin'ny soson'ny loko, izay afangaro amin'ireo singa tetezamita tsy dia fahita eto an-tany, ary avy eo nopetahany a 20 hatramin'ny 100nm sosona diélectrika silika matevina matevina. Ary farany nopetahany sosona taratra aluminium.
Ireto vokatra elektronika ireto izay mila mahatratra ny toetrany andriamby ary afaka mirakitra data, hahatratrarana ireo fiasa ireo, mbola mila miantehitra amin'ilay horonan-tsary natsipin'ny zavatra maro samihafa, ary ny filaharan'ny fanjakana kristaly aseho aorian'ny famoronana ilay sarimihetsika..
Précédent: Ahoana ny fanomanana tanjona kendrena
Manaraka: Ny tombony amin'ny tanjona kendrena mikraoba sy planar